Iingongoma malunga nesikolo-esifutshane nehlekisayo. Iingongoma malunga nesikolo esiprayimari kwibanga lokuqala kwi-Knowledge Day
Iingongoma malunga nesikolo kwiklasi yokuqala ngomhla woLwazi. Iingoma ezifutshane ezimfutshane zokufunda abantwana ezikolweni zasesekondari
Ixesha lasehlobo liphelile kwaye isikolo siya kudibana neendwendwe zayo ezincinane kwakhona ngeengalo ezivulekile. NgoSeptemba 1 kuya kuvakala intsimbi evuyayo, amagumbi okufundela aya kugcwalisa ngevumba leentyatyambo, uvuyo lokudibana nootitshala abatsha kunye nabahlobo abadala baya kuphazamisa wonke umntu kunye nomntu wonke. Iimvakalelo ezintle ziza kuhamba ngeengqungquthela ezintle kwaye zivela kuyo yonke iifesi ezimfutshane nezihlekisayo malunga nesikolo, abantwana abasenkulanga, iiklasi ezi-1 ziya kuvakala.Abantwana nabaselula, abaphefumlelwe yimigca yeengqungquthela, ukugqithisa okukhulu phakathi kwehlobo lokungakhathali kunye ne-autumn yebasebenzi kuya kuphawula. Into ephambili kukuba ukhethe inkondlo, efana nomntwana osemncinci wesikolo, ukwenjenjalo ukuba wabuxelele ngenkuthalo kumgca wokuqala ebomini bakhe.
Izibongo ezimfutshane nezihlekisayo malunga nesikolo
Ukuqala kunye neqela elidala le-kindergarten, abantwana baphupha ngokuza kwabo esikolweni, ukuqala kofowuni, izifundo ezithakazelisayo, utshintsho olumnandi kunye neholide eqaqambileyo. Kodwa kwiintloko ezincinci kukho izimpendulo ezimbalwa kwizigidi zemibandela eyahlukeneyo. Uvuyo, iimvakalelo kunye nokulindela zidibene kunye kunye nembono iya kuya kwiindonga zesikolo asabonakali kubantwana abanemibala. Funda izibongo ezifutshane kunye nezikrakra malunga nesikolo-phuhlisa konke ukwesaba nokwesaba. Vumela abantwana ukuba bahlaziye imizila yeenkondlo bafumane iimpendulo ezingekhoyo kuyo yonke imibuzo "yesikolo". Tshintsha! Tshintsha! Ukudansa phantsi! Iindonga ziyazamazama! Vosmeschku Goshi, Lena, iJackets, iincwadi, iimbotyi! Ngubani ozele ngokuzeleyo ukuba afihle aze afune, Ngubani obeka phezu kwamagxa ehlombe, Ngubani owenza iincwadana zakhe zibe ziqhekeza. Kwaye bawubhabha phezu kwethu ngamagqabi aphiko, Amacangcwaba aphuma emdongeni aze afike eludongeni! Apho, uBoris walwa neRom, apho uLucy noToma baba ngabahlobo, Kukho izixhobo ze-Skorylova eziqhelekileyo ziyavakala!
Sachitha iyure ukucoca iklasi elitsha. Iingqununu ezilikhulu zeefolofi, i-stubs eyikhulu kunye neenkomfa Sifumene. Kwakukho izifundo ezintathu nje kuphela, Akunjalo ezintlanu Azingekho ezintandathu. Sasikwazi njani ukubhala, ukufunda nokutya kakhulu?
Ndiza kuthatha iminyaka emininzi ukuba ndifunde, Musa ukugxeka kwaye ungabi mvila, Musa ukufihla ekuphumeni kobusuku. Ngaphandle kweencwadi zokujonga amehlo, Ngoko, emva kokugqiba ikhosi, Fumana idiploma yesigqirha, Yenza ubuso obuqinileyo kwaye uthumele ileta: "Umlawuli wesikolo,
Iindinyana ezithandekayo ngesikolo kubafundi besikolo
Ukuba izikolo ezinokufundela ezihlekisayo zisesibhakabhaka zibonakala ngathi zizinto ezikude, ezingaqhelekanga kwaye zingachangekanga. Emva kwakho konke, ixesha lokuziqhelisa kwi-kindergarten eqaqambileyo ye-fairy idibanisa nezifundo eziqinileyo kwiziko lemfundo. Ngandlela-thile kuya kuba lixesha apho iifesti zezingane ezihlekisayo kunye ne-sarafan chops ziza kufuneka zithatyathwe yifom ye-school uniform kwaye iya kwilizwe elikude lolwazi elisezantsi kunye nomfundisi ohlakaniphileyo nolwazileyo. Kodwa unako ukukhetha izibongo ezihlekisayo malunga nesikolo kubafundi besikolo sokufunda kwaye ufunde ezimbalwa. Ndiyayithanda isikolo ukusuka ekhaya kancinci ngaphambili. Wonke umhlobo wam uyazi: Ndithiyile ukukhawuleza! Kodwa lonke ixesha kwenzeka (njani, andiyiqondi!), Ixesha lidlula ngokukhawuleza, ukuba ndibalekele esikolweni. Namhlanje ndidibana nekati emnyama endleleni. I-Brazenly iwela umendo, Ungandivumeli ukuba ndidlule. Yintoni eyayingayenza? Kwafuneka ndihambe. Ngoko ukuba kungekudala, ndandihamba phambili! Izolo ndiyinto ehlekisayo kakhulu. Intsana yam yadibana nam, wayenobuso obuhle kangaka! Kwaye ingqumbo yavutha ngumsindo. Ndiye ndigijime ngokukhawuleza. Ngokukhawuleza esikolweni ndazifumanisa, ndiphulaphula irekhodi lam! Kwa kutshanje ndaya kwindawo yokwakha ndakhangela indlela ... Ndichitha ixesha elininzi lokuba andinaso ixesha lokuba ndifike khona! .. Ndinezinto ezininzi ezinomdla ndidibana nazo zonke iindibano ezihamba phambili ukufumana isifundo kwiklasi. Mhlawumbi kusasa kakhulu ukuba ndihambe ekhaya? Ewe, ndoyika ukuba ndiya kuqhubeka ndiqhuba yonke imihla!
Ndiyaqonda iVolodin Mark ngaphandle kwedayari. Ukuba umzalwana uza ne-troika - Amathongo amathathu. Ukuba ngokukhawuleza kwindlu yethu I-peal iqala-Ngoko ke ezintlanu okanye ezine ndinazo namhlanje. Ukuba ufika ne-deuce - ndiva kusuka kude: Kukho ezimbini ezimfutshane, ukukhawuleza okungahambiyo. Ewe, ukuba inyunithi - Uyakhula ngokukhawuleza emnyango.
Bantwana! Yiya esikolweni, iCockerel yavuma ixesha elide! Zama ukugqoka ngokukhawuleza - Ilanga likhangele ngefestile! Indoda, kunye nerhamncwa, kunye nentaka-Bonke baya kuthatha ishishini labo; Ngomthwalo udonsa i-bug, Ukuze ubusi ujonge inyosi. Inkundla icacile, i-meadow iyavuya, Ihlathi livukile kwaye likhwaza, i-Woodpecker iyanqatha kwaye ikhuluphele! Umbhalo uyamemeza. Abalobi bebethabathe umnatha, Kwimida yabeka amathongo ... Ukuthandazela, kwincwadi, abantwana! UThixo akayilawule ubuvila!
Iingoma ezilula ezifutshane malunga nesikolo kwi-1 kwiklasi
Ingqwalasela ekhethekileyo imele iimbongo ezilula ezifutshane malunga nesikolo kwiklasi eli-1. Bahlala benomusa kwaye banomdla, benamanqaku okulindela ukuvuya kweentlanga zesikolo, ngokubhekiselele kwiimpawu zendabuko, kunye neefowuni zokufunda ngokukhutheleyo nokunyamekela. Abaqashi bokuqala bakunzima ukukhumbula iinkondlo ezide kunye neengcamango, ngoko ke iinqwelo ezincinci zokuqala zomgca ziya kulungelelana. Iindinyana ezimfutshane nezilula malunga nesikolo seklasi eli-1 zijongwa ngokukhawuleza kwaye zigcinwe ngekhanda ixesha elide. Lungiselela umntwana wakho ngoSeptemba 1, makamangaliswe utitshala wakhe. Kungekudala esikolweni. Andikho kuyo iintsuku ezingamashumi asithoba anesithoba. Kwaye, ukuba ndikuxelele ngenene, ndamkhumbula. Ndandifuna ukuthatha iincwadi, Thatha iincwadi zokubhala, uthathe ityala lepencil. Ngenxa yokuba mna, bafana, bahlale bekhathele.
Ihlobo likhawuleza lihamba, Kwafika unyaka wesikolo, Kodwa sinakho nekhampani ezininzi iintsuku ezilungileyo ziya kuzisa. Sawubona, ekwindla igolide! Isikolo, ikhukhula ilanga! Iklasi lethu eliqaqambileyo, eliqaqambileyo, Uphinde udibana nathi.
Wavula i-notebook, iBriefcase kwikhephu. Kwaye andinakuyibona iliso ezintlanu eziphezulu! Mhle! Ngophawu. Iikaroti zibomvu. Le ncwadi ihlakaniphile ngayo!
Iingoma ezihle malunga nesikolo ngomhla woLwazi
Incoko yeFowuni yokuqala yoFowuni ayikho nje ukuvuyisana ngabafundi besikolo kunye nootitshala abanomnyaka wesikolo esitsha, kodwa nangethuba lokubonisa uluntu kumgangatho wemfundo yanamhlanje. Ngomhla woLwazi, ukusuka kwizikolo zesikolo, izikrini zeTV kunye nee-microphone zezixhobo zomsakazo, iindinyana ezimnandi ngesandi esikolweni, ezibhekiswe kubo bonke ababukeli kunye nabaphulaphuli. Kwimizila yeengqungquthela isoloko igqityiwe zonke iingqungquthela zexesha lesikolweni sabantwana kunye nokusilela kwenkqubo yemfundo. Funda izibongo ezintle malunga nesikolo kwiSuku loLwazi kwaye uqaphele. Endleleni, amantombazana, endleleni, abafana! Kwimanqanaba yolwazi, isinyathelo ngesibindi. Iintlanganiso ezintle kunye neencwadi ezintle Izenzo ziya kuba kulo. Kulo nqanaba le nto ungasifinyelela ekujuleni kolwandle, Phuka phantsi, ukhuphuke iintaba. Kwaye kufinyelela kwenyanga. Amanyathelo amanyathelo kwinqanaba liya kuba, Kodwa uqinisekiswe indlela exabisekileyo, Ukuze wenze ubungani ngommangaliso omangalisayo, Igama likaZnan.
Ndiza kukuxelela ngaphandle kokugqithisa. Ndiyathetha ngeklasi yesampula. Bayabathanda ootitshala bethu kwaye, ngokuqinisekileyo, akusiyo ize: Umfundi wethu, uPavlov Vadik, - Owona matika ophezulu kwisikolo. U-Lena Gurieva ungumculi, uSokolova ungumdaniso. Ngaphandle kweziphambeko ubhala kwiklasi Yonke into echazwe nguSom Vasya, kwisixeko saseOlimppiad yethu uNadia yethuyisa. Ukuncintisana kwabantwana besikolo: Ukuvakasha ngaphezu kwabo bonke bamemeza bethu uPetya, Ode kakhulu afunekisiwe noAndryusha, Bonke babekhuthele kakhulu uKsusha. Ukuhleka, ukwenza ubuso Nsuku zonke ilungile Серёжа. Kuphela umnxeba wekhefu, njengesiqhwithi, uGenka uya kuhamba. UKolya uthanda ukulwa noDima, uTomakami ukuba atshintshe. Awunayo enye i-Danilka, kodwa iifowuni ezimbini! Wonke umntu uya kuxela imfihlo yemfihlelo afundileyo, iSveta. Ubhala kwingqungquthela isalathiso Ngohlobo lwababengumlobi uDeniska. Kwaye xa kukho ukucocwa - Iipansi ziyimfucuza yonke i-Egorka. Eli liqela elikhulu! Sikumema ukuba u tyelele!
USeryozha wathatha incwadi yakhe-ndagqiba ekubeni ndifundise izifundo: Amachibi aqala ukuphinda Neentaba zasempuma. Kodwa ke i-electrician yafika. USeryozha waqala ukuthetha ngeentambo zeendlela, malunga ne-wiring. Ngomzuzu kamva wayesazi umatshini, njani ukuxhuma kwisikhephe, kwaye ukuba uSeryozha uneminyaka elishumi ubudala, kwaye loo mphefumlo ungumphefumlo. Kodwa ngoku ukukhanya kuye kwafika kwaye i-counter ithathwe. USeryozha wathatha incwadi yakhe-ndagqiba ekubeni ndifundise izifundo: Amachibi aqala ukuphinda Neentaba zasempuma. Kodwa ngokukhawuleza wabona kwifestile, ukuba igceke lomekile kwaye licocekile, ukuba imvula iphelile ixesha elide Kwaye abadlali bashiya. Wabeka phantsi incwadi yakhe. Amachibi angalinda. Ngaphandle koko, wayengumgcini-mgcini, akazange eze ekhaya kungekudala, malunga neeyure ezine. Wayekhumbula malunga namachibi. Wabuyisela kwakhona incwadi yakhe - ndagqiba ekubeni ndifundise izifundo: amaLwandle aqala ukuphinda Iintaba zempuma. Kodwa uAlyosha, umntakwabo omncinci, uSerezin waphula isikolo. Kwafuneka ndilungise iivili ezimbini Kwili scooter. Wayexabana naye malunga nesiqingatha seyure Wayehamba ngendlela. Kodwa apha i-notebook yaseSerezhina Ixesha leshumi livulekile. "Bangakanani bacela!" - Ngokukhawuleza wathetha ngomsindo .- Ndihlala kule ncwadi kude kube ngoku kwaye andizange ndifunde amachibi.
Iingongoma malunga nesikolo kubafundi besikolo samabanga asekuqaleni kunye nabaqalayo-baluli zizithethe ezikhethekileyo. Ukufunda abantwana abancinci be-quatrain abancinci baxhomekeke kunyaka wesikolo esitsha, ehambelana nomoya wezifundo ezizayo, kusebenze konke ukunyaniseka kwabo kunye noxanduva lwabo. Cacisa ngevesi lezingane malunga nesikolo esiphambili ngosuku loSuku loLwazi, vumela umntwana ukuba azive njengekhonkco ebalulekileyo kwikhenkethi enkulu yesikolo.
Iindinyana ezibuhlungu kunye ezichaphazelayo zokugqibela umnxeba
Unomtsalane kakhulu kwaye uyamncoma ngomzalwana wakhe wokuzalwa
Siyavuyisela ngomhla weeMedic-poems, prose, SMS. Ukuthokoza kunye neengqungquthela kwiHholide lomsebenzi wezonyango
Iingoma malunga nesikolo - abantwana, ezonwabileyo, namhlanje. Amagama, izicatshulwa kunye neengoma zezikolo zesikolo kwiitars
Uvuyisana kakhulu ngosuku lokuzalwa lomntu kwivesi kunye neprose
Impembelelo yoxinzelelo emzimbeni
Isizathu esibalulekileyo sokufa komzukulu kaPlaton Lebedev
Isaladi kunye ne-tuna kunye nekhukhamba
Ngokusemthethweni nangokusebenzayo: umboniso ophezulu weendlela eziphezulu zekhitshi zangaphakathi
Inja ngumhlobo womntu kunye nosana
4 ezimnandi kunye nezicwangciso zobuhle ezihle zikaMonica Bellucci: indlela yokujonga kwi-53 ukuya kwi-35!
I-Apple cocktail kunye ne-limoncello kunye ne-cranberry
Umnyango wangaphambili weFeng Shui endlwini yangasese
Izemidlalo yezingane: nini ukuqala nokukhetha
Unyango lwe-hernia yomgca omhlophe wesisu
Unamandla kwaye uziqhenyce uNatalia Gundareva